သခင်လေး… ဒီပို့စ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ပြီးတာနဲ့ ရုံးက ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျသွားတယ်။ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုက ရေရှည်မှာ အရေးမကြီးပါဘူး။ ရောင်းအားက ဘယ်လောက်လဲ။ ဝင်ငွေ။ ဝင်ငွေ။
စတီဖင်ကို သင်္ဘောပေါ် သယ်ဆောင်လာတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သူက အရမ်းတော်တဲ့လူဖြစ်ပြီး မင်းတို့နဲ့တွဲရတာ ဝမ်းသာပါတယ်... သူဘယ်လိုတူးဆွပြီး အရာတွေကို ဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာကို မင်း အံ့သြမိမယ်ထင်တယ်။
Re: ဒီလိုပါ။ သင့်ဖောက်သည်များနှင့် ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်- အချို့အရာများသည် တိုင်းတာရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ဘလော့ဂ်နဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အရမ်းနှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိနိုင်သလို ရိုးရိုးသားသား ပြောရမယ်ဆိုရင် ဖောက်သည်တွေကို အာရုံစိုက်မှု အများကြီးပေးနိုင်ပါတယ် - ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ - ခက်ခဲတဲ့အရာတွေအားလုံးကို သိပါတယ်။ အရင်က တိုင်းတာရင် အခု တိုင်းတာလို့ရတယ်။
a b၊bမှ c နှင့် c todတို့ကို ဦးတည်စေသော သက်သေပြချက် ပေးသည့် မြင်သာသော funnel ဖြင့် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကို စိန်ခေါ်လိုပါသည်။ ဖောက်သည်များက ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ၊ ရိုးသားပြီး ရရှိနိုင်သည်ဟု ဖောက်သည်များက တွေးဆသောအခါ… ၎င်းတို့အတွက် ပိုကောင်းလိမ့်မည် ။ သူတို့အတွက် သက်သေပြဖို့ပဲလိုတယ်။
မင်းဒီမှာတွေ့ရတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Bean Cup ကို ဘယ်တော့ လာမှာလဲ ။
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခေါ်အဝေါ်အငြင်းအခုံတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသွားပေလိမ့်မည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် ရှိသင့်ရှိထိုက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။
A. ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် သင်၏နှိုင်းယှဉ်မှုတွင် အနည်းကိန်းဖြစ်ရပ်တစ်ခု (သို့မဟုတ် အနည်းဆုံး ဝယ်ယူမှုများမှ အစပြုသည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု) ဖြစ်ပုံရသည်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ နောက်ထပ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတွင် လူတစ်ဦးချင်းစီကို “ပါဝင်ရန် သို့မဟုတ် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟု စောဒကတက်ပါသည်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် အနည်းကိန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပင် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ဖောက်သည်တို့ကြား ပိုမိုကြွယ်ဝသော ဆက်ဆံရေးသို့ အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် သေးငယ်သော ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ သူတို့ကြားက အကွာအဝေးကို ကျုံ့သွားတယ်။
B. သင်စာရင်းသွင်းထားသော "ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု" ၏ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းများထဲမှ တစ်ခုစီကို အရေအတွက်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်လည်း ၎င်းတို့ကို ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ မင်းရဲ့သံသယစိတ်တွေကို ငါမျှဝေတဲ့နေရာမှာ ဒီဖော်ပြချက်တစ်ခုစီကို သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက် တွက်ဆတဲ့အခါဖြစ်တယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးမှ မှတ်ချက်ရေးထားခြင်းကြောင့် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းသတ်မှတ်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် နီးကပ်လာသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု လုပ်ဆောင်ချက်များသည် လုပ်ငန်းတစ်ခု လိုချင်သည့် နောက်ဆုံးရလဒ်တစ်ခုဆီသို့ တည်ဆောက်သင့်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် ဤ (မကြာခဏလိုင်းမဟုတ်သော) လမ်းကြောင်းကို အပြီးသတ်ရပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Travelocity သည် မအောင်မြင်သည့်နေရာတွင် ဖောက်သည်တစ်ဦးစီ၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခုစီသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အဆုံးပန်းတိုင်ကို ပြီးမြောက်အောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို မတွေးဘဲ အေးမြသော အသိပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုအချို့ကို ဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်သည်။
C. မင်းရဲ့ဥပမာနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကုမ္ပဏီတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေဆီကနေ လက်စွပ်တစ်ကွင်းကို တကယ်ရနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီများသည် ဖောက်သည်တစ်ဦးကို အဆက်မပြတ် ဆွဲဆောင်ရန်၊ ၎င်းတို့နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်၊ ၎င်းတို့နှင့် ဆက်ဆံရေးအသစ်များ တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား အိမ်ထောင်ရေးတွင် လမ်းလျှောက်သွားသည်ဟု ထင်ပါက၊ ၎င်းတို့၏ပုံတွင် ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းမှာ မည်မျှမြန်သည်ကို အံ့သြသွားမည်ဖြစ်သည်။
ရှည်လျားသောမှတ်ချက်အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဟာ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ မက်ထရစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မတူတဲ့အမြင်တစ်ခုသာ။
ကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်ချက်နှင့် ကောင်းမွန်သော စကားဝိုင်း။ မင်းရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ထဲမှာ၊ ဒီဖြစ်ရပ်တွေထဲက ဘယ်ဟာက ငွေကြေးဆက်ဆံရေးကို အမှန်တကယ် 'ဦးဆောင်' စေတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ငါစိန်ခေါ်မယ်။ သင့်လုပ်ငန်းမှ လူများဝယ်ယူရန် အဓိကနည်းလမ်းမှာ သင့်ဘလော့ဂ်တွင် မှတ်ချက်ပေးခြင်းဖြင့် စတင်သည်ဟူသော အထောက်အထားများပေးသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း၏ အရောင်းလမ်းကြောင်းကို ပြပါ… သို့မဟုတ် သင့်တွင်ရှိသော Follower အရေအတွက်နှင့် သင့်စျေးကွက်တစ်ခုလုံး၏ စျေးကွက်ဘတ်ဂျက်အကြား ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကို ပြသပါ။
လူတွေက ဒါဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် pseudo စွမ်းဆောင်ရည် ညွှန်ပြချက် တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်လို့ လူတွေက ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့် ငါ့စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် ဤအရာများနှင့် အမှန်တကယ်ဝယ်ယူမှုကြားတွင် အကြောင်းတရားနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည့် အထောက်အထားများနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဒေတာကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယနေ့အထိ bs လို့ထင်ပါတယ်။
Doug၊ ဒါက ကြီးကျယ်တဲ့ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီး 'ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု' ဟာ အလွန်အကျွံအသုံးပြုပြီး ဟောင်းနွမ်းနေတာကို သဘောတူပါတယ်။ အဆုံးစွန်သော စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည် လုပ်ငန်းကို တွန်းအားပေးသည့်အရာအပေါ် အာရုံစိုက်ပြီး သင့်ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ၎င်းတို့၏ငွေများကို စွန့်လွှတ်ခြင်းအတွက် အလေးအနက်ထား၍ လူများကို ပေးဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ - မိုက်ကယ်